warts plantar libhekisela izimila ingozi ka isikhumba unyawo. It has uhlobo uphawu okuqinile round ukuma, okuyinto elilunguzile ezingeni isikhumba enempilo futhi ensundu pink noma ogodweni.
Ingaphezulu kumiswa sokuqala bushelelezi, kodwa isikhathi kuba anolaka ngenxa epidermis keratinized. Uma uyikha phezulu le warts enjalo ongabona amaphoyinti amnyama zilimele capillary. Ngezinye izikhathi phakathi nendawo ikhefu wentaba eyakheke.
I insumpa plantar kuyinto omsakazo viral - ukubukeka kwayo kungenxa isenzo somuntu papilloma virus esifafazwa contact. Imvelo evumayo kakhulu igciwane - umswakama ukushisa, kaningi ukutheleleka kwenzeka okubhukuda, ama-sauna futhi zokuzivocavoca. Uma ezingeni lelisetulu amasosha omzimba, nabo lwegciwane emzimbeni lesi sifo ngeke, kodwa ukwehla ekumeleleni mzimba of esitobhini isikhumba kokuba warts.
Kuyinto ephawulekayo ukuthi lo mshumayeli zokugula landile phakathi abantu hyperhidrosis izinyawo (ngokweqile ajulukayo kubo) koma zabo ngokweqile. Ukuthuthukiswa lesi sifo futhi neqhaza izicathulo Friend, flat nezifo ezenzeka nge kahle izicubu trophic (isb, isifo sikashukela, isifo sokuqina kwemithambo yegazi, noma varicose emithanjeni).
Ezimweni eziningi, kuba nokwaziswa insumpa plantar, kodwa umsebenzi eliphezulu igciwane avele emfundweni yengane, ingxenye abathintekayo senyawo kuba uhlobo mosaicism.
Mangisho ukuthi warts plantar kwezinye izimo zinyamalale bebodwa ngaphandle kokushiya noma yimiphi iminonjana esikhumbeni, kodwa ngokuvamile kakhulu kuyinto ukulimala kwabo uma uhamba, okuholela sebuhlungwini obunzima, kanye nokungakwazi ukuhamba ngendlela evamile.
Ukuxilongwa kanye nokwelashwa warts plantar bekulokhu wesikhumba, okumele kubhekwane nazo ngokushesha ihlonze noma yibuphi zokwakheka ngezinyawo. akunakwenzeka ukuba afeze yokuzithiba, ngoba izimpande warts amanga ezijulile, nokususwa yabo ayiphelele eyoqala ukuvela izakhi ezintsha. Ngaphezu kwalokho, lapho umonakalo izicubu ezingadingekile, okuyinto zitholakala eseduze, igciwane udluliselwa izingxenye enempilo, okuholela kwetinhlavu inqwaba ingane izinto.
Uma ufuna ukuthola impendulo yalo mbuzo kanjani ukususa insumpa ekhaya, ungafaka isicelo elula abantu iresiphi. Ngidinga isikhathi esithile ukukuthinta insumpa nge garlic emini. Kungenzeka futhi ukulungisa inhlanganisela eyodwa ugarliki, isipuni uviniga esincane ufulawa kakolweni, okuyindawo ukwakha ikhekhe futhi ukuphoqelela phezu insumpa, usimende uphawu bese ugcine izinsuku 2-3 - the insumpa plantar ewa ngokwalo.
Nokho, ngokushesha futhi iyashelela ukuqeda warts kwi ngezinyawo kumele uxhumane nodokotela wakho, abangakwazi ukusebenzisa electrocoagulation, cryotherapy, laser noma umsakazo namagagasi okusheshayo ukususwa warts. It kungabuye kwenziwe excision kuhlinzwa ngaphansi izinzwa wendawo, esimweni warts ezinkulu.
Mangisho ukuthi kwezinye izimo ukwelashwa wendawo akwanele, ngakho isiguli kuboniswa ethola antivirals futhi immunomodulators.
Izifo Bruton sika: etiology, izimbangela, izimpawu kanye nezici ukwelashwa
I iminenke zidla endlini futhi ngokwemvelo